Iimveliso zeplastiki ze-Asbestos ze-asbestos - abavelisi be-china i-asbestos gasket yezixhobo, abaxhasi
I-QF3710 Iibhodi ezinganyangekiyo ezinobushushu obuphantsi
Yenziwe nge-aramid fiber, i-carbon fiber, i-fiber eyenziweyo yamaminerali, i-oyile kunye neqondo lokushisa elisezantsi elincamathelayo, ukongeza izongezo ezisebenzayo ezihambelanayo, kwaye yenziwa ngendlela yokuqengqeleka.
Zilungele zonke iintlobo zeoyile, amanzi, ifriji, irhasi ngokubanzi, kunye neminye imithombo yeendaba njengezinto zokutywina.
Ngokukodwa kucetyiswa imeko yomoya, icompressors, isinanisi sokufudumeza ipleyiti kunye nezinye iinkqubo zefriji okanye iinkqubo zonxibelelwano zokupholisa njengokutywina iigaskethi.
I-QF3736 Iphepha elinobushushu obungaphantsi kwe-asbestos
Yenziwe nge-aramid fiber, i-carbon fiber, i-synthetic fiber fiber, i-adhesive enganyangekiyo, ukudibanisa izongezo ezisebenzayo, kwaye yenziwa ngendlela yokuqengqeleka.
Zilungele zonke iintlobo zeoyile, igesi ngokubanzi, amanzi kunye neminye imithombo yeendaba njengezinto zokutywina.
Kucetyiswa ngakumbi ishishini ngokubanzi njengezinto zokutywina iimpahla zelinen.
Yenziwe nge-aramid fiber, ifayibha yekhabhoni, ifayibha yeglasi, i-adhesive enganyangekiyo yeoyile, ukongeza izongezo ezisebenzayo ezihambelanayo, kwaye yenziwa ngendlela yokuqengqeleka.
Ukufaka amanzi kulwelo olufana neentlobo ezahlukeneyo zeoyile, umoya, amanzi, umphunga, njl.
Isetyenziswa njenge gasket yeemoto, izithuthuthu, oomatshini, ipetroli-chemistry, njl.
QF3716 Iphepha lokutywina i-asbestos
Yenziwe nge-aramid fiber, i-cellulose fiber, i-fiber eyenziweyo yamaminerali, i-adhesive enganyangekiyo yeoyile, ukongeza izongezo ezisebenzayo ezihambelanayo, kwaye yenziwa ngendlela yokuqengqeleka.
Ingasetyenziselwa ukunxibelelana neoyile, igesi ngokubanzi, amanzi, umphunga, njl.
Isetyenziswa njenge gasket yenjini yokutsha ngaphakathi, umbhobho osisangqa, izikhongozeli zoxinzelelo, njl.
Yenziwe nge-fiber ye-aramid, ifayibha eyenziweyo yamaminerali, i-adhesive enganyangekiyo yeoyile, ukongeza izongezo ezisebenzayo ezihambelanayo, kwaye yenziwa ngendlela yokuqengqeleka.
Ikhuthazwa ngokukodwa njengemathiriyeli yegasket yezixhobo zaselwandle.
Ingasetyenziselwa ukunxibelelana neoyile, igesi ngokubanzi, amanzi, njl.
Isetyenziselwa i-injini, impompo yeoyile, impompo yamanzi, zonke iintlobo zoomatshini, umbhobho osisangqa njengezinto zokutywina.
Kuyacetyiswa ngokukodwa ukuba kusetyenziswe ukutywina i-gasket kumatshini wokusebenza ngokubanzi kunye nazo zonke iintlobo zeempompo.
I-QF3700 Iphepha elinobushushu obungaphantsi kwe-asbestos
I-FBYS411 Iphepha lokutywinwa kwe-asbestos
Nge-grafite powder, i-Kevlar fiber kunye ne-adhesive ekhethekileyo yokudibanisa, yongeza i-additives ezisebenzayo, ukusetyenziswa kokukopa inkqubo yezomthetho.
Ngokuncamathela kobushushu obunganyangekiyo, ifayibha engenashushu-enganyangekiyo kunye nefomathi yobushushu obuphezulu bokungenisa intsebenziswano, yongeza izongezo zemichiza ezifanelekileyo, ukusetyenziswa kokukopa inkqubo yezomthetho.
I-FBYS411 i-fiber eqinisiweyo yegraphite grafti yombhali
I-FBYS268 Iphepha lokutywinwa kwe-asbestos
I-aramid fiber, i-carbon fiber, i-fiberglass, njl.njengempahla yamathambo, i-oyile enganyangekiyo kwintsebenzo ekhethekileyo, yongeza izongezo zemichiza ezihambelana noko, iifilitha, ukusetyenziswa kwenkqubo yomthetho yoxinzelelo.
I-FBYS402 Iphepha lokutywinwa kwe-asbestos
Nge-butyl latex, imicu ye-asbestos-free kunye nokuzaliswa okusebenzayo kwintsebenziswano, yongeza izongezo zemichiza ezihambelanayo, ukusetyenziswa kokukopa inkqubo yezomthetho.